“Raqay Ninkii Lahaa Dabada Haysto Ma Kacdo!!!”- Yaa Hortaagan In Ay Dalka Ka Qabsoonto Doorasho Loo Dhan Yahay?– Qalinkii Xassan Cumar Hoorri | Hangool News
“Raqay Ninkii Lahaa Dabada Haysto Ma Kacdo!!!”- Yaa Hortaagan In Ay Dalka Ka Qabsoonto Doorasho Loo Dhan Yahay?– Qalinkii Xassan Cumar Hoorri
April 8, 2019 - Written by Hangool News 1
Waxaa ay ahayd 2dii April, markii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi uu la kulmay wafdigii ugu cuslaa oo dalka soo gaadha, kuwasoo ka koobnaa ergayga Midowga Yurub (EU) iyo danjirayaasha dalalka Sweden, Finland, Denmark, Norway iyo UK ee fadhigoodu yahay Nairobi, Kenya.
Turuntorooyinka Ku Gedaaman Doorashooyinka:
1. Diidmada qayaxan ee ka soo yeedhay siyaasiyiinta, xubnaha barlamaan, hoggaamada dhaqan, culimada, haweenk iyo dhallinyarta Gobolada Awdal iyo Salel taasoo ay ku saleeyeen walaaca ka jira saami-qaybsiga iyo wada lahaanshaha dalka. Arrintaas oo madaxweynahu si fool ka fool ah uga la xaajooday salaadiinta goboladaa ilaa hadda ma ay muuqato xal uu u helay.
2. Diidmada qayaxan ee ka soo yeedhaysa qaybo ka mid ah siyaasiyiinta, xubnaha barlamaan, hoggaamada dhaqan, culimada, haweenk iyo dhallinyarta Gobolada Sanaag iyo Sool iyadoo la sugayo si dhakhso ah in ay uga soo baxaan baaqyo loo dhan yahay oo ka digaya in dalka lagu sii dhaqo waxii xilka lahaa ee beelaha qaarkood ku dulqaadanayeen muddo 25 sannadood ah.
3. Diiwaangelinta qabyada ah ee muwaadiniinta dalka iyadoo ilaa hadda aan la diiwaan gelin tiro lagu qiyaasay 30% codbixiyayaasha.
4. Dhammaystirka shuruucda qabyada ah ee lagu geli lahaa doorashooyinka. Xeerka cusub ee Doorashooyinka Guud waxaa muhim ah in uu sugo qoddobo lagu caddaynayo saamiga gobolada cabashadu ka jirto (Awdal, Salel, Sool iyo Sanaag), kootada haweenka, iyo Beelaha laga tirada badan yahay. Arrintaasi waxaa ay suurtagelin doontaa in la helo barlamaan loo siman yahay ilaa iyo inta laga gaadhayo tirokoob dhammaystiran iyo barlamaan ku fadhiya tirada dhabta ah ee dadka.
5. Magacaabidda Komishan haysta kalsoonida saddexda Xisbi iyo tiro loo kordhiyo beelaha martida ka ah xisbiyada qaran, ka dib marka la kala diro komishanka hadda jooga oo xilligoodu gabaabsiga yahay.
6. Shaqaalaysiinta hawlwadeenada Komishanka Doorashooyinka ee Gobolada Bariga Fog.
7. Tababaradii iyo Wacyegelinta bulshada Bariga Fog.
8. Dhismaha xukuumad loo siman yahay sida (wasiirro, agaasimayaal guud, mareeyayaal, taliyayaal ciidan, danjirayaal, xuquuq ganacsi, qandaraaslay, sinnaan horumarineed, agaasimayaal waaxyo iyo shaqaale) kuwaas oo dhammaantood ku jira gacanta Madaxweynaha JSL.
9. Diyaarinta saamiga xukuumadda kaga soo hagaagaya miisaaniyadda Diiwaangelinta iyo Doorashooyinka.
11. Gudagalka furitaanka Distuurka dalka iyo Xisbiyada Qaranka.